Wararka - Ujeedada korinta dheriyada iyo doorka shaaha
Ujeeddada kor u qaadidda dheri ma aha oo kaliya in shaaha laga dhigo mid dhalaalaya oo qurux badan, laakiin sidoo kale sababta oo ah dheriga dhoobada (ama dheri dhagaxa) laftiisa ayaa leh dabeecadda xayeysiinta tayada shaaha. Sidaa darteed, shaah si fiican loo ilaaliyo ayaa si waxtar leh "shaah u caawin karta"
Korinta dheriyada waxay la mid tahay sida loo beeray geedo, habka dhariinta korinta adoo jiidaya geedo ayaa laga yaabaa inay noqoto mid wax ku ool ah in muddo ah, oo aan dabiici ahayn. Kaliya samir iyo dayactir maalmaha shaqada, oo gabi ahaanba aan degdegsanayn, ayaad si buuxda ugu muujin kartaa dadaalkaaga shaahaaga.
1. Dayactirka dheriga cusub Ka hor inta aan la isticmaalin dheriga cusub, daawaynta waa in la sameeyaa. Tani waxay la mid tahay xaflad furitaan weyn oo ay tahay in la qabto markabka marka la dhiso iyo ka hor intaan la dhoofin. Waxaa jira laba nooc oo ah hababka dheriga cusub oo hadda aad loo aqoonsan yahay, mid waa midka dhaqanka, kan kalena waa midka fudud.
1. Habka dhaqanka, dheri qaado oo si fiican u maydh adiga oo aan lahayn wax ur ah. Dheriga biyo ka buuxi, qoto dheerida biyuhu waxay ka badnaan kartaa 2 cm oo dhan shaaha shaaha ah, ka dibna ku rid shaaha cusub ee la iibsaday. Ka dibna si tartiib ah ugu kululee dab yar. Markay biyuhu karkaraan, ku dar caleemo shaah oo aad u badan oo lagu dubay kulayl culus oo kari ilaa 3 daqiiqo.
Kadib, soo qaado caleenta shaaha ee la diyaariyey, oo sii wad inaad ku kariso dab yar 30 daqiiqo. Soo saar shaaha, ku rid meel engegan oo aan ur lahayn, oo u daa shaah si dabiici ah u qallajiya hooska.
Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar baa ka taga tallaabada caleenta shaaha oo kaliya waxay ku kariyaan dheri cusub biyo nadiif ah. Midka ka wanaagsan kan ka liita, ma aha mid qeexan oo ku saleysan doorbididda shaqsiyeed.
Marka la soo koobo, ujeedka ugu weyn ee labadani waa in la qasbo budada ku jirta daloolada jirka dheriga, laga saaro urta ciidda, wasakhda iyo lakabka dhuuban ee dushiisa jirka dheriga.
2. Hab fudud Taasi waa, iyada oo si tartiib tartiib ah loo kordhinayo heerkulka biyaha, budada ku jirta daloolada jirka dheriga ayaa dhammaada. Isla mar ahaantaana, qaado caday yar. Ku qoo biyo kulul 3 daqiiqo. Marka buraashka cadaygu uu jilco, mari daawada cadayga oo marmar ku cadaadi gudaha iyo dibadda dheriga dhoobada ah.
Habraacyadan yar ka dib, waxaa laga saari karaa carrada, urta aan fiicnayn iyo dhumucda dheriga cusub.
Iibiyaha ugu fiican Sacuudi Carabiya shaaha dheri qaxwada kafeega xarkaha dhaldhalaalka
Ugu dambayn, dheriga cusub gudaha iyo dibaddaba ku biyo raaci biyo karkaraya.
Kadib xafladdan weyn ee "daahfurka", dheriga cusub si rasmi ah ayaa loo "bilaabi karaa". Waa wax lagu farxo inaad haysato dheri wanaagsan, laakiin haddii aadan aqoon sida loo ilaaliyo dheriga ama habka dayactirka uusan habboonayn, waxaad yeelan doontaa dheri wanaagsan oo aan micne lahayn.
Markaa haddii aad haysato dheri caan ah, dheri qadiimi ah, ama shaah casri ah oo leh qaab guuleysanaya, waxaad kaliya ku tiirsanaan kartaa dayactirka taxaddar leh maalmaha shaqada si aad uga dhigto dheriga jaceylkaaga inuu u ekaado "Liangju la kulmo Bole" oo soo bax qoyaankeeda.
Adkaanta shaaha dhawaaqa way kala duwan tahay iyadoo ku xiran heerkulka dabka. Sidaa darteed, dhawaaqa shaaha ayaa sidoo kale loo qaybin karaa qallafsanaan ama xanaaq.
Ma jiro halbeeg la hubo oo ah in codku qalalan yahay ama dhiiqadu ka fiican tahay.
Si kastaba ha ahaatee: Sida ay qabaan inta badan dadka aqoonta u leh, dheri leh cod qallafsan ayaa aad ugu habboon in lagu kariyo shaah leh caraf udgoon iyo sare (sida shaah cayriin ah);
Dheri leh cod dulqaad leh ayaa ku habboon in lagu kariyo shaah kulul oo leh halsano culus iyo dhadhan hoose.
Habka lagu kala sooci karo dhawaaqa dheriga ayaa ah inaad shaaha ku dhejiso calaacasha gacantaada bidix oo aad si fudud u tababbarto jirka dheriga fartaada midig.
Hal qodob oo ay tahay in si gaar ah loo adkeeyo ayaa ah in dhoobada Yixing ay ka kooban tahay qaybo quartz ah, sidaa darteed markaad samaysato shaah, waxaad arki kartaa iftiin yar oo dahab ah markaad hoos dhigto iftiinka, taas oo ah astaamo aysan dhoobada kale lahayn. Sidoo kale, dheriga hoostiisu waa mid siman oo hagaagsan, saxeexuna waa inuu ahaadaa mid hagaagsan.
Caadi ahaan dheri wuxuu lahaan doonaa ugu yaraan laba ama ka badan shaabadood, badiyaa xagga hoose, daboolka ama gacanta dheriga.
Wax -ku -oolnimada dheriga Ka sokow dheri wanaagsan oo u muuqda mid indhaha ku farxiya oo qurux badan, waxa ugu muhiimsan waa tayada adeegsiga. Si kale haddii loo dhigo, wax ku oolnimada dheri shaah.
Cabbitaanka shaaha iyo dheriyada daawashadu ma aha oo kaliya raaxada nolosha, laakiin sidoo kale waa farshaxanka nolosha.
Hawsha iyo shaqada muhiimka ah ee shaaha waa in si buuxda loo muujiyo midabka iyo udugga caleenta shaaha.
Sidaa darteed, marka aad iibsanayso shaaha shaaha, qofku waa inuusan xoogga saarin oo kaliya dhinacyada dhif iyo naadir ah, laakiin sidoo kale wuxuu xoogga saaraa wax ku oolnimadiisa. Su'aasha wax -ku -oolnimada waxaa looga hadli karaa laba dhinac, mid waa nooca shaaha, midna waa cabbirka shaaha.
1. Noocyada shaaha shaaha Dadka qaarkood waxay ku takhasusaan ururinta noocyada kala duwan ee shaaha, kuwaas oo loo arko inay yihiin qadiimiga. Sidaa darteed, cimriga shaaha oo dheeraada, qiimaha ayaa sare u kaca; marka labaad, qiimaha shaaha wuxuu ka yimaadaa sayid caan ah, qiimaha sidoo kale aad buu u kala duwan yahay. Markaad iibsanayso shaah, ha ahaato mid cusub ama mid duug ah, waa inaad marka hore cabirtaa awooddaada maaliyadeed ee shaqsiyeed ka hor intaadan go'aan qaadan. Caagadaha waxaa inta badan loo qaybiyaa badeecooyinka galaaska iyo alaabta dhoobada, labaduba waxay leeyihiin sifooyin u gaar ah. Shaaha cadcad ayaa ku habboon muujinta carafta waxaana inta badan loo adeegsadaa in lagu diyaariyo shaaha qallalan (shaah cayriin), shaaha dhoobada ah ayaa ku habboon muujinta dhadhanka, waxaana badanaa loo adeegsadaa soo saaridda shaaha culus ee qallalan (Shaah kulul).
2. Cabbirka shaaha Awoodda shaaha ayaa kala duwan, tan yarna waa koob yar oo keliya, waana mid u gaar ah cabbitaanka shakhsi ahaaneed: midka weyn wuxuu leeyahay daraasiin koob oo yaryar, kuwaas oo loo isticmaali karo daraasiin qof inay wada cabbaan. Sidaa darteed, markaad iibsanayso shaah, hubso inaad go'aamiso cabbirkeeda iyadoo ku xiran adeegsigaaga iyo saaxiibbadaada. Haddii kale, shaahku aad buu u yar yahay, waxaa jira dad soo booqda oo aad u badan, oo waa goor dambe oo la cabo: waa sharaf -darro in la daweeyo martida. Taa bedelkeeda, haddii shaahdu aad u weyn tahay oo ay yar yihiin martida, waxay noqon doontaa ixtiraam darro in lagu qasbo martida.
Ku talin dhowr shaaha kulul leh iibka ugu sarreeya sannadka 2020
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo ay muhiim tahay dhaqanka soo jireenka ah iyo baahsanaanta caadooyinka cabbitaanka shaaha, dadku waxay si isa soo taraysa fiiro gaar ah u siinayaan qaabka, tayada iyo farshaxanka dheri ee cabbitaanka shaaha.
Isticmaal shaah fiican si aad u diyaarisid shaah tayo sare leh, taas oo ku habboon labada cunto-cabbayaasha labadaba. Shaaha oo la cabo iyo shaaha la cabo waa dhacdo xarrago leh oo indhaha lagu farxo iskuna maaweelisa. Sidoo kale waa farshaxanka nolosha iyo raaxaysiga nolosha, kaas oo waxoogaa xarago ah ku dari kara nolosha mashquulka ah.
Dhadhaminta shaaha oo keliya ayaa naftaada ku quusin karta jawi deggan oo xasilloon;
Dhadhaminta shaaha saaxiibbada saddex ama shan: waad ka wada hadli kartaa adduunka oo dhan, oo xitaa waad iloobi kartaa waxa caawa iyo habeenka. Tani sidoo kale waa heerka ugu sarreeya ee "martida habeenkii qabow waxay u yimaadaan shaah sidii khamri".
Gacan lagu soo qaaday
Wax wasakh ah ma leh
"Bay'adda u fiican, wax -soo -saar leh iyo hal -abuurnimo"
Kobcinta silsiladda sahayda iyo waayo -aragnimada iibinta hodanka ah waxay hubisaa adeeggayaga macaamiisheenna.
haswon “abaalmarinta hal -abuurka teknolojiyadda ugu wanaagsan” ee xafladda sideedaad ee Shiinaha
Waayo -aragnimo hodan ah
Shirkadeena Black Tea waxaa lagu soo saaray 247 tan oo iib ah USD 5,000,000
Bilowgii ilbaxnimada aadanaha, maacuunku waxay ahaayeen qayb lama -huraan u ah nolosha aadanaha. Kumanaan sannadood ka dib, iyada oo horumarka ilbaxnimada aadanaha, waxaan sii wadnay inaan ka dhigno weelashaas kuwo aad u qurux badan, wax ku ool ah oo jilicsan